दशैं पछि तरकारी खेती गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? लिनुहोस सम्पूर्ण आधारभूत जानकारी - कृषि पत्रिका
दशैं पछि तरकारी खेती गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? लिनुहोस सम्पूर्ण आधारभूत जानकारी
सोमबार २० असोज, २०७६	comments
यो पुस्तकमा करेसाबारी तरकारी खेतीभन्दा व्यवसायिक तरकारी खेतीतर्फ विशेष ध्यान दिने गरी व्याख्या गरिएको छ । आजको जमाना व्यवसायिक तरकारी खेतीको हो । यसमा निर्धक्क लगानी गर्नु पर्छ । उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्दछ । उन्नत जातको बिउ प्रयोग गर्नु पर्छ । २९४ जना मानिसहरुलाई काम दिन सकिन्छ र राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
समुद्र सतहबाट ६०० मिटरदेखी १५०० मीटरसम्मको उचाइमा फैलिएको क्षेत्र जहाँ गर्मीको तापक्रम २० डिग्री से.देखि ३० डिग्री से. रहन्छ । हिउँदको औसत तापक्रम १० डि।से।देखि १५ डि.से.सम्म रहन्छ । कहिलेकाहीँ शून्य डिग्रीको नजिक पनि पुग्दछ । यहाँ गर्मीमा उपोष्ण र जाडोमा शीतोष्ण अवस्था रहन्छ ।